रियल बेटिस विरुद्ध बार्सिलोनाको खेलमा घटेका ३ ठुला घटना र पदर्शन !! - Experience Best News from Nepal
बार्सिलोनाले ला लिग फुटबलमा आफ्नो विस्तार रुप देखाउदै आईरहेको छ। निकै लामो अपराजय यात्रा कायम गरेको बार्सिलोनाले ला लिगा फुटबलमा टाइटलका निम्ति आफुलाई पूर्ण दावेदार बनाएको छ। च्याम्पियन लिग देखि यूरोपियन पूर्ण लिगमा बार्सिलोनाले हर टाइटलका निम्ति टिमलाई मजबुत गरको पाउन सकिन्छ। एर्नेस्टो भाल्भार्डे प्रशिक्षकमा रहदै गर्दा हालै रियल बेटीससंग बार्सिलोनाले ४-१ गोल अन्तरले बेटिसलाई पराजित गर्यो।
बेटिससंगको जितसंगै बार्सिलोनामा ३ असर र प्रभाव देखिएको छ:
लुइस स्वरेज चोटको सामना गर्दै
बार्सिलोनामा निकै प्रवाब छाडेका लुइस स्वरेजले उक्त खेलमा एक गोल साथै एक सुन्दर एस्सिस्ट गरेका थिए। उनले फोर्लनको स्तर कायम गर्न सफल भएका छन्, ला लिगा इतिहासमा उरुग्बेका सर्वाधिक गोलकर्ताका रुपमा लुइस स्वरेज स्थापित भए। उक्त खेलमा स्वरेजले सुन्दर मौकाहरु गुमाए तर निकै दुखद खबर उक्त खेलमा उनि चोट ग्रस्त भएका थिए। उनले खेलको अन्तिममा मैदान छाडेका थिए, हाल उनको खुट्टा मर्किएको पुस्टि भएको छ।
उरुगेको राष्ट्रिय खेलमा फर्किने उनको चाहना अधुरो हुने भएको छ भने चाडै उनि बार्सिलोनाको खेलमा भने फर्किने आसंका गरिएको छ। मार्च ३०मा बार्सिलोनाले एस्पैनोलको सामना गर्दै छ। उक्त खेल भन्दा निकै ठुलो खेल च्याम्पियन लिग २ खेल युनाइटेड विरुद्धको खेलले बार्सिलोना स्वरेजका निमित चिन्तित छ।
बार्सिलोना टाइटलको निकै नजिक छ
एथलेटिको मड्रिडको हारबाट बार्सिलोनाले निकै ठुलो फाइदा लिएको छ, मड्रिडले बिल्बाओसंगको हारले ला लिगामा बार्सिलोनाले १० अंकको अग्रता लिन सफल भएको छ। १० ला लिगा खेल बाकी हुदै बार्सिलोनाले टाइटलको दावेदार बनाएको हो।
बार्सिलोनाले ४-३ को बेटिस विरुद्ध हारको बदला लिन सफल भएको छ, नोभेम्बरमा भएको हारको बदला बार्सिलोनाले मार्चमा आएर पुरा गर्यो। आउदै गरेको खेलका निमित् बार्सिलोनालाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेकले निकै राहत पुग्ने दाबी गरिएको छ।
विपक्षी समर्थकले उठेर मेस्सीको सम्मान
बेटिस विरुद्ध मेस्सीले जादुइ खेल पदर्शन गरे, उनको अनुखा ३ गोल र मेस्सीको टिम ब्यबस्थापनले बेटिसको समर्थकलाई उठ्नु बाध्य गरायो। प्रथम गोल फ्री किक निकै सुन्दर थियो भने दोश्रो फ्लिक निकै सुन्दर थियो। मेस्सीले खेल पश्चात भने आफुले उक्त सम्मानको आसै थिएन। तर खेल र उनको भूमिका सम्माननीय थियो।
२६ ला लिगा खेल खेलेका लिओनेल मेस्सीले २९ ला लिगा गोल गरिसकेका छन् भने पूर्ण सिजन खेलमा ३९ गोल गरिसकेका छन्। उनले ४ ह्याट्रिक गोल गरेका छन् र हाल मार्च चल्दै छ।
मेस्सीको जादु सिजन भर बाकी नै छ !!!
कोपा अमेरिका : ब्राजिललाई जिताउन भ्रष्टाचार भएको आरोप, मेस्सीद्वारा पदक अस्वीकार
मेस्सी रोनाल्डो – बालोन डी’ओरको दौडमा बर्नाड़ो अब्बल
जिदानसंगै फर्कियो रियल मड्रिड !! सोलारी शैलीलाई त्याग्दै रियलले निकाल्यो जित
मेस्सीले रियल म्याड्रिडलाई तर्साउन सक्दैन, हामीसंग संसारकै सर्बोकृस्ट खेलाडी छ !! भिनिसियस